10 Tilmaamood oo ku saabsan qoraalka Qoraalka 'SEO' ee Darajooyinka | Martech Zone
10 Tilmaamood oo ku saabsan qoraalka Qoraalka 'SEO' ee Darajooyinkaas
Isniin, Disembar 23, 2013 Isniin, Disembar 23, 2013 Douglas Karr
Toddobaadkii hore waxaan la kulannay illaa 30 qoraa mid ka mid ah macaamiisheenna oo waxaan ka wada hadalnay sida qoraalladooda ay uga faa'iideysan karaan matoorada raadinta markay qorayaan qoraalladooda. Talooyinkayagu waxay ahaayeen kuwo la siman xogtan TusmadaVerve.
Maqaallada ay dadkani qorayeen waxay horey u ahaayeen kuwa la yaab leh - sidaa darteed waxaan diiradda saarnay laba qaybood oo muhiim u ah hagaajinta.
In la sameeyo cinwaanada cajiibka ah taas oo ku soo jiidanaysa akhristaha qiiro leh oo xiisaynaya xiisaha ay u leeyihiin inay gujiyaan.
Hubso in qorayaashu si madax-bannaan u dhisteen kalsoonida iyo maamulka, dhiirrigelinta waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyo kor u qaadista awoodda guud ee astaanta.
Sidii aan horayba u idhi - SEO waa dhibaato bina-aadam, maahan dhibaato xagga xisaabta ah. Qoraalka weyn ee qoraalka wuxuu ku saabsan yahay soo jiidashada dareenka dhagaystayaashaada. Markaad taas sameyso, makiinadaha raadinta ayaa raaci doona!
Tags: copywritingayna search enginenuqul qorista
28, 2013 at 2: 32 PM
Waad ku mahadsantahay qoraal xiiso leh - Waxaan u maleynayaa inaad sax tahay, Google wax uma cabirto sidii ay ahaan jirtay.
Waa algorithm aad u xeel dheer maalmahan - dhab ahaantii waxay doorbidaa waxyaabo muuqaal dabiici ah u eg.
Waxaan u maleynayaa in SEO ay muhiim u ahaan doonto (ganacsiga) illaa Google sayidkiisa kumbuyuutaro runti leh AI oo fikiri kara - markaa shaqo la'aan ayaan ku jirnaa!
Google+ ayaa sidoo kale aad uga sii muhiimsan - qoraaga oo dhan.
Apr 2, 2014 at 12: 26 AM
Waa hagaag, dhammaan talooyinka aad wadaagtay waa kuwo aad u fiican oo runtii shaqeynaya. Waxaan fikrad ka haystay iyada oo ah qoraaga caafimaad-dabiiciyeed-Michael Jones uu abuuro nuqullada SEO si waafaqsan. Shaqaalaynta Qoraalkaaga Qoraalka wuxuu ahaa go'aan wanaagsan, maadaama aan helayo labada nuqul-daabicid iyo adeegyo suuq-geyn ah oo hal saqaf hoostiisa ah. Eedeyntu waa macquul waanaya aragnimo badan.